UKUXhobisa: YINTONI? YENZIWA NJANI? KUNYE OKUNINZI
Ukuba awukayiqondi yintoni ukuxhobisa nendlela onokuyisebenzisa ngayo; ke unethamsanqa, kuba apha siza kuchaza yonke into ekufuneka uyazi ngayo; Qiniseka ukuba xa ugqibile ukufunda, isifundo sicace gca.
1 Yintoni ukuXhotyiswa?
1.1 Amandla ayilwa njani?
1.2 Ukugcina engqondweni
2 Iimpawu zokubakho
2.1 Amandla alinganayo
2.2 Ukuhambisa iipropathi
2.2.1 Inqaku elibalulekileyo:
2.3 Amandla ombane
2.4 Isiseko esifanelekileyo kunye nesiseko esibi
2.4.1 Inqaku elibalulekileyo
2.5 Isiseko kunye nenombolo 10
3 Ukuziqhelanisa nokuxhotyiswa
Okokuqala, kubalulekile ukubonisa ukuba igama elithi ukuxhotyiswa linxulunyaniswa ngokusondeleyo nesenzi "ukunika amandla"; isenzo sithetha ukubonelela ngamandla kwinto ethile; Ngamanye amagama, zisa amandla okanye amandla. Kwimathematics, amandla asetyenziswayo ukuphakamisa inani kumandla athile.
Umzekelo, ukuba senziwe ngo-5 sonyuselwa ku-4, sijamelene namandla, isiphumo sawo singama-625; Emva kwexesha siza kubona ukuba kutheni. Amandla anokusetyenziswa kumanani okwenyani, amanani antsonkothileyo, kunye neendlela ezahlukeneyo zealgebra.
Ukusukela ukuba siwuchukumisile umxholo, apha siza kukushiya inqaku elihle apho sithetha khona ngokunzulu malunga amanani entsonkothileyo; ukuba awazi ukuba zintoni ngoku.
Amandla ayilwa njani?
Amandla asetyenziselwa ukunciphisa ukuphindaphinda okwenziwe ngokulandelelana kwenani elifanayo. Amandla enziwe ngesiseko, eli nani liphindaphindwe ngokuphindaphindiweyo, kunye nesibonisi, esibonisa inani lamaxesha isiseko esiza kuphinda-phindwa ngaso; emva koko inombolo yesiseko ibhalwe ngendlela eqhelekileyo, kwaye amandla abekwa emancinci kwikona ephezulu ngasekunene.
Masiyibone ngomzekelo: ukuba siphinda-phinda "4 x 4 x 4", inani eliphindaphindwe li-4, ke lonto iyakuba sisiseko sethu; Kwelinye icala, ezi zine ziphindaphindwe izihlandlo ezi-3, ngendlela eya kuthi ibonakalise; ke, amandla aya kuhlala ngale ndlela 4³, njengoko sibona emfanekisweni.
Kuyimfuneko ukucacisa ukuba ii-exponents, ezikwabizwa ngokuba zii-indices, zinokuba gwenxa kwaye zibe nethemba, kwaye zenziwe ngamaqhezu, nkqu nangamanani angaqhelekanga; kwelinye icala, i-exponent ingaba yinani elipheleleyo okanye inkulumbuso.
Kwangokunjalo, ezincwadini nakwii-intanethi, sizakufumana umthambo othi "inani elibhite" okanye "isikwere"; Ke xa sithetha ngesikwere, sithetha ukuba umphicothi zimbini (2), kwaye xa sisithi ityhubhu, isalathiso sesithathu (3).
Amagunya aneempawu ezahlukeneyo okanye izinto ezithile ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa kusenziwa imisebenzi yokuxhobisa; Ezinye zeepropathi ziya kuba lula ukuqondakala kunezinye, masibone ukuba ziyintoni:
Kwimeko yokuba namandla ahlukeneyo anesiseko esifanayo, kunokwenzeka ukubenza lula ngokubeka isiseko kube kanye, kunye nokwenza isibonisi esinye ngesixa sazo zonke izinto ezikhutshiweyo. Umzekelo, ukuba sino-7³, 7⁴ no-7², kuyafana ukubeka u-7⁹; Sifumana esi sivelisi sitsha ngokudibanisa u-3 + 4 + 2.
Xa uthotho lwamanani lufakwe kubakhuseli "()", eziphindaphindwe ngamanye, kwaye iseti iphakanyiselwa kumbonisi othile; Ungalikhupha inani ngalinye, ulinyusele kulwandiso ngokukodwa kwaye iziphumo ziya kufana. Umzekelo, ukuba sino (3 x 4 x 5 x 2) ² = 14400, singabeka u-3² x 4² x 5² x 2² kwaye iziphumo zisayi kuba ngu-14400.
Kwelinye icala, ukuba unayo izahlulo yamandla esiseko esilinganayo, kunokwenzeka ukuyibuyisela endaweni yamandla elinye; Oku kufunyanwa ngokuthabatha isalathiso sesahlulo, kunye nesalathiso sesahlulo. Masibone, ukuba sinesahlulo 5⁶ / 5⁴ = 25, sifumana iziphumo ezifanayo xa sibeka u-5²; Sifumana eli xabiso ngokukhupha izibonisi ezibini, kuba 6 - 4 = 2.
Ukuba sinokongeza okanye ukuthabatha kunye nomboniso ofanayo, umbane awuyi kuba usasazo; Ngamanye amagama, ukuba sifumana iseti yokongezwa okanye ukukhutshwa okufakwe kubakhuseli kwaye sikhuphele kumveleli ofanayo; izinto azinakukhutshwa kwaye ziphathwe njengamagunya ahlukeneyo, njengoko sibonile kwimeko yokuphindaphinda.
Njengoko sibonile, ngamandla ungenza imisebenzi engapheliyo yemathematika njengokuphindaphinda kunye nokwahlulahlula; emva koko, kunokwenzeka ngokulingeneyo ukuphakamisa inani esele linamandla. Ngale ndlela, ukufumana amandla elinye igunya, umsebenzi unokwenziwa lula ngokuphindaphinda ii-indices kunye nokuphakamisa isiseko kwinani elisisiphumo.
Umzekelo, ukuba siyasebenza (7²) ⁴, kunokwenzeka ukuyibuyisela ngo-7⁸, kwaye iziphumo ziya kuhlala zinjalo; Njengoko sibona, i-exponent entsha (8) ifunyenwe ngokuphindaphinda izixhobo zokuqala (2 x 4).
Isiseko esifanelekileyo kunye nesiseko esibi
Iimpawu zamandla zinokuba zezintle kwaye zibe mbi; emva koko, kwimeko apho isiseko silungile, iziphumo zomsebenzi ziya kuba ntle ngokulinganayo; kodwa, kwimeko yamagunya amabi, iziphumo aziyi kuhlala zihlala zilungile.
Iziphumo ziya kwahluka ngokuxhomekeka kwixabiso lokukhupha; Oko kukuthi, ukuba i-exponent linani elilinganayo, imveliso iya kuba ntle, kodwa ukuba isalathiso asiqhelekanga, iziphumo ziya kuba mbi. Masibone: ukuba sino (-5) ² isiphumo siya kuba ngu-25, kulungile; kodwa, ukuba sino (-5) get sifumana -125, sisiphumo esingu-negative.
Kwimeko yeziseko ezingalunganga, i-eksponenti iya kuchaphazela zombini inani kunye nomqondiso ukuba uku-parentheses; Kwelinye icala, ukuba isiseko asinabazali, isibonisi siya kuchaphazela kuphela inani; Makhe siyibone ngomzekelo.
Isiseko kunye nenombolo 10
Xa sifumana amandla anesiseko esingu-10, kwisiphumo siya kuthi sibeke inombolo engu-1 emva koko, zibe ngu-0 njengoko kubonisiwe ngumbonisi; Masibone:
10 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10,000; Njengoko sibona, sibeka inombolo 1 kunye no-0.
10 x = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100,000,000; kwakhona, u-1 kunye nobungakanani be-0 oboniswe ngumbonisi obekekileyo, ekuya kuthi kule meko ibe zii-8 amaxesha.
Okokugqibela, nantsi into eza kukushiya nevidiyo imisebenzi yokuxhobisa ukwenza kwakho kwaye ube yingcali yamandla; Siyathemba kwaye ulithandile inqaku lethu.